Adreesị: Grajska cesta 1, 5000 Nova Gorica, Slovenia;
Ekwentị: +386 5 335 98 11;
Oge mmepe: Mon, Tues. - emechi, Wed, Thurs., Fri., Sat. - 12-15, 19-22, Sun. - 12-17.
A na-aghọtakarị ụlọ a dị ka usoro usoro siri ike, nke gbara mgbidi gburugburu, nke e wuru na ebe a na-apụghị imeri emeri. Castle nke Obrábkr ( Slovenia ) pụrụ iche na nke a. Ọ dị nso na Nova Gorica, n'etiti ubi vaịn ma bụrụ akụkụ nke Goritsky Museum. N'otu oge ahụ, e wuru ihe owuwu ahụ na elu 116 mita.
Kedu ihe na-akpali banyere Castle Cromberk?
N'ịbụ nke e wuru na narị afọ nke 17, nnukwu ụlọ nke Cromberk bụ ụlọ na-arụ ọrụ, n'akụkụ nkuku nke ụlọ elu dị. A na-eji ụlọ Renaissance mma ụlọ ụlọ atọ ahụ ma ogige gbara ya gburugburu. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na nnukwu ụlọ ahụ dị iche na ọtụtụ ụlọ ndị dị na Slovenia, ọ dị oke mma.
Oge na agha hapụrụ ihe a ma ama na ọdịdị ahụ. E bibiri ọtụtụ akụkụ nke nnukwu ụlọ ahụ, a pụghịkwa iweghachi ya. Ka o sina dị, ndị njem nleta ga-ahụ ike nke ịma mma na ike mbụ ahụ, ọ bụ ezie na mgbidi nke ógbè a na-atụ anya iji zoo ndụ kwa ụbọchị nke ndị nwe ha karịa maka agbachitere.
Kọ Henrik Dornberski wuru Castle Cromberk, wee ree ezinụlọ Coronini. O nwere ulo a rue 1954, mgbe ụlọ ahụ ghọrọ ebe obibi Goritsky Museum. Tupu anyị etinye aka n'ime ihe ngosi ahụ, a rụgharịrị nnukwu mmezi, ebe a na-ere ụlọ ahụ ọkụ na Agha Ụwa Mbụ, ahụhụ sitere na ala ọma jijiji na Agha Ụwa nke Abụọ. Mgbe mweghachi ahụ na-arụ ọrụ, akụkụ nke ebe obibi na ụfọdụ ụlọ nlekọta echebewo.
N'ala ala a meghere ụlọ ahịa ihe ngosi, ihe ngosi ya bụ ọrụ na style baroque site na Middle Ages. N'etiti ha, e nwere ihe osise nke Emperor Franz Joseph I. Ihe ngosi ahụ nwere uwe, foto na ngwá ụlọ nke narị afọ XIX. Otu n'ime ihe ndị a ma ama bụ otu n'ime ụdị mbụ nke igwe ejiji akwa. Ala ụlọ nke abụọ nke ụlọ a na-ejikwa ihe ndị ọkà mmụta ihe omimi na nke ethnological nwere.
Nyochaa ọ bụghị naanị na etiti ụlọ, kamakwa mpaghara gburugburu ụlọ. A na-achọ ya mma na style Baroque, dị ka isi iyi gbara gburugburu, nke etinyere n'etiti 1774. Ụlọ elu ahụ na-enyekarị nzukọ ọmụmụ ihe na ihe ngosi oge na-adịghị anya.
Ihe kachasị mma nke ogige gburugburu ụlọ ahụ bụ ọnụnọ nke ọtụtụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na enweghị okooko osisi. Maka akuku, ndi oru ubi naele anya, ya mere, ha di nma. Ije ije n'akụkụ ihe ndị a abụghị ihe na-agwụ ike, n'ihi na, ebe ọ bụ na ogige ahụ nwere ihe niile na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. N'ime ogige ahụ, e nwere ihe nkiri amphitheater na lapidarium (nkọwa nke ihe odide nke odide oge ochie nke a na-eme na nkume).
Ozi maka ndị njem nleta
Ọnụ ego ntinye bụ 2 € kwa onye. Na Monday, a na-emechi ụlọ ahụ, dịka na January 1, maka Ista, November 1 na December 25. N'oge okpomọkụ, a na-atụ anya ndị ọbịa site na elekere 9:00 ruo 18:00, n'oge oyi - site na 09:00 ruo 17:00. Maka nleta Saturday, ọ dị mkpa ikwere na nchịkwa ụlọ ihe ngosi na mbu.
Castle Kromberk dị kilomita 5 n'ebe ọwụwa anyanwụ obodo Slovenia nke Nova Gorica . Ọ kachasị mma ịnweta ụgbọ ala.
Ụlọ ihe nkiri Arsenal
Katidral Dome (Tallinn)
Ụlọ Nobel Peace Center
Castle nke Svojanov
Ụlọ Ntube Pearl
Kedu akara nke zodiac dị mma maka Libra?
Njirimara ọgwụgwọ nke chicory
Hapụ - ihe nje megide cystitis
Kedu otu esi eme akwukwo onwe gi?
Krupenik na multivark
Style "Akwa Gatsby"
Nsogbu Metabolic - esi meziwanye ndụ nke ndụ?
Na-ekpo ọkụ ọkụ n'ụlọ
Ọgwụgwọ psoriasis n'ụlọ
Ọzọ mammary glands n'okpuru òké
Ihe ndozi maka kichin nke nkume artificial
Ihe na-acha odo odo - gịnị ka ọ bụ, gịnị dị iche na skinnie, onye kwesịrị ekwesị na ihe ị ga-eyi obere?
Nri na creamy ihendori
Echiche maka obere ime ụlọ
Uwe mkpara nke ụmụ nwanyị na-ekpo ọkụ
Akpaliri arụ ọrụ maka afọ ọsịsa
Kedu ka esi tufuo onye isi ulo?
Kedu ihe jikọrọ ụwa ọnụ - uru na nkwekọrịta nke ijikọ ụwa na ihe ọ pụtara
Akara Gigi Hadid n'elu ịnyịnya ga-apụta na magazin Allure
Agent Provocator swimsuits
Ndị na-anụ mmiri n'ime ime
Ngalaba na-ekpuchi ụmụaka